Ukuhlolwa kokubona - I-Delta Engineering Belgium
Faka kungobo yomlando kusuka kusigaba "Ukuhlolwa kokubona"
NgoMsombuluko, 13 Okthoba 2014 by Ubunjiniyela beDelta
Uhlelo lokubuka kwezomnotho oluhambisanayo
Luhlelo lokubonisana lomnotho oluhlangene, olwenzelwe ukubeka ngaphezulu kokuhambisa okukhona. Kuzokuvumela ukuthi uhlole ubukhulu bebhodlela, amabala amnyama, i-ovality, isikhu, ukuguqulwa kwebhodlela, imibala, njll.
Ubuningi bamakhamera afinyelela kwabayi-4 kusuka ezinqumweni ezahlukahlukene, aze afike ku-12MB, atholakale.
Ishicilelwe ku Ukuhlolwa kokuhlola
Uhlelo lokubona oluthuthukile
Ingabe uhlelo lokubona oluthuthukile, olwenzelwe ukuhlanganisa imigqa yokukhiqiza. Kuzokuvumela ukuthi uhlole ubukhulu bebhodlela, amabala amnyama, ama-ovality, isikhafu, ukuguqulwa kwebhodlela, imibala, njll.
Ubuningi bamakhamera afinyelela kwabayi-8 kusuka ezinqumweni ezahlukahlukene, aze afike ku-12MB, atholakale.
ULwesithathu, 01 Ephreli 2020 by UCristina Maria Sunea
Uhlelo lokubona isivinini esiphezulu
Ingabe uhlelo lokubuka isivinini esikhulu, lwenzelwe ukuhlanganisa imigqa yokukhiqiza. Izokuvumela ukuthi uhlole ubukhulu bebhodlela, amabala amnyama, ama-ovality, isikhafu, ukuguqulwa kwamabhodlela, njll
Uhlelo lokubona oluthuthukisiwe lweziqukathi
Ingabe uhlelo lokubona oluthuthukile, olwenzelwe ukuhlanganisa imigqa yokukhiqiza. Idizayini ekhethekile yokuhlolwa kwejerrycans ngevolumu efinyelela ku-10L.